Androany tolakandro dia nitsidika ny zanako vavy tany amin'ny biraony aho (Dada manao ahoana aho?). Nijanona teo amin'ilay fivarotana ampitan'ny arabe, ny The Fresh Market aho, ary naka ravina voninkazo mahafinaritra ho an'ny latabany sy sakafo kely ho an'ny mpiasa tao. Rehefa nijery aho dia vaky ny rivotra… Natsofoko ny carte de crédit EMV-ko ary niasa vetivety izany. Io no haingana indrindra hitako niasa tamina fiasa niaraka tamin'ny alàlan'ny chip
Raha tao amin'ny IRCE aho dia nipetraka niaraka tamin'ny SVP an'ny Intuit's Payments and Commerce Solutions, Eric Dunn. Izany dia fijerin'ny maso ny fitomboan'ny Intuit eo amin'ny tsenan'ny mpivarotra sy ny ecommerce. Raha ny marina dia maro ny olona tsy mahatsapa fa vola be kokoa no mivezivezy amin'ny Intuit noho ny PayPal raha ny resaka varotra an-tserasera no resahina (raha ampidirinao ny tolotra karamany). Intuit dia manohy miezaka ny ho vahaolana maharitra amin'ny orinasa ecommerce na antsinjarany aiza
Smartcards mihodina mandritra ny taona vitsivitsy
Talata, Aprily 15, 2014 Alatsinainy Aprily 14, 2014 Douglas Karr
Wow… rehefa mieritreritra momba ny fitaovana manokana natokana sy miankina amin'ny carte de crédit magnetika belle ianao, dia fitaovana iray sy fandaniana taonina any hanolo izany. Mandritra ny taona vitsivitsy ho avy anefa dia izany no tena hitranga! Efa mivoaka ny carte de crédit nentin-drazana. Nila ny fanapahana karatra 70 tapitrisa Target tamin'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra 2013 mba hanosehana ny Kongresy hiala amin'ny karatra maivana tsy dia azo antoka nampiasan'ny